Creative Writing » မီးပျက်တဲ့ တည…	16
Posted by Yae Myae Tha Ninn on Jul 7, 2016 in Creative Writing | 16 comments
-ညဘက်ကြီး မီးပျက်လို့ ပူပြီး ကယောင်ကတန်းမက်ပြီး ထယောင်နေတာပဲ…. -ps; တကယ်တော့ အိမ်မက်ထဲက သူခိုးက ညံ့တာ.. လှေကားအောက်က အမေ ရှူးရှူးပေါက်နေကျ သေးအိုးထဲမှာ ရွှေတွေ အပြည့်ဆိုတာ မသိလိုက်ဘူး… သူလဲ ၀င်ချင်မှာ ဟုတ်ဘူးလေ… အဲနားမှာ ခြတောင်ပို့ကလဲ ရှိနေတော့ ဘယ်သူထင်မှာလဲရို့… ဒါက ရတနာအိုးဆိုတာကို…. ရေမြေ့သနင်း
Thint Aye Yeik says: ကျနော်တော့… ဘယ်နေရာ ဘာရှိတယ်ဆိုတာ သိသွားပြီ…
ကျနော့် တပည့်ကို လွှတ်လိုက်မယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1327
Yae Myae Tha Ninn says: အိမ်ကို ဆက်ဆက် ရောက်ဖူးပါတယ်… အဟဲ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3714
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဖတ်လိုက်ရတာ ကိုယ်တောင် သူခိုးဖြစ်သွားသလိုပဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1327
Yae Myae Tha Ninn says: ခိခိ.. ကျေးဇူး.. မွန်မွန်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
မမချွိ says: ရေးတတ်လိုက်တာ။
Yae Myae Tha Ninn says: ကျေးကျေးပါ… မမချွိ… လာအားပေးလို့… အိမ်မက်ထဲက သူခိုးပါဗျာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .ကံဆိုးသူသူခိုး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1327
Yae Myae Tha Ninn says: သူကံမဆိုးရင် အနော်ဆိုးမှာလေ… ဦးမိုက်ရဲ့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: မီးပျက်သော ညတစ်ည သံသရာအလယ်
Yae Myae Tha Ninn says: အစီအစဉ်ထဲမှာ စားဖို့လူလိုရင် ခေါ်နော်… ဟေးဟေး…ဒါမျိုးတော့ ကျွမ်းတယ်… ဘကြီးအောင်ရေ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 154
ပျင်းတကာ့ ထိပ်ခေါင်တင် says: ဒီတစ်ခေါက်မဟုတ် နောက်တစ်ခေါက်ပေါ့ကွာ
ခုနေရာသိအောင် ကွင်းဆင်းတာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1327
Yae Myae Tha Ninn says: လာသာလာခဲ့ပါဗျာ… ကြောင်ကလဲ မရိုးစေရဘူး.. တနေ့တနေရာ ပါတာ… အန်တာရောပဲ… လူကလဲ စည်းကမ်းရှိပြီး ပစ်စလတ်ခတ်ထားတတ်တာလဲ… ဟီး… နောက်တခေါက်ဆို နောက်တမျိုး ပုံစံ ပြောင်းနေပြီ… ဟီးဟီး…
မြစပဲရိုး says: Post of the Day! :-)))))
Yae Myae Tha Ninn says: ကျေးဇူးပါ… အရီး… ဟဲ… တကယ်အဖြစ်အပျက် နဲ့ စိတ်ကူး ပေါင်းထားတာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2282
Ma Ei says: ကြောင်စာအန်ဖတ်က အနီအစိလေးနဲ့တဲ့ အတိကျဘဲ
Yae Myae Tha Ninn says: ဒါပေမဲ့ သိလိုက်ပါပြီ… :P